भीरको टुप्पोबाट झरेर मर्दैछन्
कति मरिसके भेँड़ाहरू?
औला भाँचेर गन्ती गर्दैछन्
Posted by किरणकुमार राई at 8:51 PM6comments:
उनको विद्याश्रम दर्शन गर्ने
साइत कहिले जुर्ला नि!
कविताको कोमल मुटु
ठहरै हुँदैन र?
भत भत पोल्ने भाबरमा
चट्टै पार्ने मृत्युमय ओखती कुट्ने
ओखली कस्तो छ नि?
म त उनिएँ नि
तप तप गर्दै
के चुहिबसेको त्यसरी
गोहीको को पो त!
आँखा टट्टाइरहेको थियो
मलेको मात्र थिएँ आँखा
सपनाहरु पो लिपिएछन
सूर्यलाई हातकड़ी लगाएर
Posted by किरणकुमार राई at 10:59 PM No comments:
गहिरा तिम्रा ती दुइ आँखाभित्र
झ्वाम्म हाम फाल्न सक्दिनँ नि म।
डुबुल्की मारी सिपी खोज्नु त कहाँ हो कहाँ
आफ्नै मुटुभित्र बिझेको
मइनकाँड़ा झिक्न पनि सक्दिनँ नि म।
यो भित्ते घड़ी अझै चेतेको छैन
टिक टिक गर्दै कतिको ज्यान खाइसक्यो
त्यसको हिसाप योसित छैन।
सिँहासनमा गजधम्म अड़ेस लागेर विराजमान
न आँसु झार्नु छ आँखाबाट
न मुस्कान छोड़्नु छ ओठबाट।
डर पो लाग्दैछ मलाई त
अकालमा खिएको जाबो यो शरीर
लमतन्न परेको हेर्नलाई
मूक दर्शक बन्न पनि बेर छैन!
Posted by किरणकुमार राई at 9:11 PM No comments:
(সাতসৰী, মাৰ্চ ২০০৯ত প্ৰকাশিত)
अन्तरङ्ग आलाप, एलओकेडी महाविद्यालय, ढेकियाजुली, असम-2012
असम नेपाली साहित्य सभाको ४१औं स्थापना दिवस- कवि सम्मेलनको अध्यक्षता गर्दैः काजिरङ्गा ४ जनवरी २०१४